Iindaba -Ukuthelekisa izibonelelo kunye nokungalunganga kweendlela eziphambili zokuqhubekeka kwezinto zokwenza izinto zeplastiki
Umgaqo ziphene yokubumba kukuba ukongeza granular okanye izinto olungumgubo kwi hopper kumatshini ziphene. Izinto eziphathekayo zifudunyezwa kwaye ziyanyibilika kwaye ziyasebenza. Ngaphantsi kokuqhubela phambili kwesikrufu okanye ipiston yomatshini wenaliti, ingena kwisikhunta somlomo ngombhobho kunye nenkqubo yokuphosa ukungunda. , It lukhuni kwaye ezimilise kwisisu sokubumbela. Izinto ezichaphazela umgangatho wenaliti yokubumba: uxinzelelo lwenaliti, ixesha lenaliti, ubushushu benaliti.
1.Umjikelo wokubumba omfutshane, ukusebenza okuphezulu kwemveliso, kunye nokuzenzekelayo ngokulula.
2. Amalungu eplastiki aneemilo ezimdaka, imilinganiselo echanekileyo, kunye nokufakwa kwesinyithi okanye okungezizo ezentsimbi kunokwenziwa.
3. Umgangatho wemveliso uzinzile.
4. Uluhlu olubanzi lwemikhwa.
1. Ixabiso izixhobo ziphene yokubumba liphezulu.
2. Ubume besitofu sokubumba sonakele.
3. Ixabiso eliphezulu lokuvelisa, umjikelo wemveliso ende, ayilungelanga imveliso enye nebhetshi encinci yeeplastiki.
Phakathi kweemveliso zeshishini, iimveliso ezenziwe ngenaliti zibandakanya: izinto zasekhitshini (iitoti zerhasi, izitya, iibhakethi, iimbiza, i-tableware, kunye nezikhongozeli ezahlukeneyo), amaqokobhe ezixhobo zombane (ezomisa iinwele, ezicocekileyo, abaxube bokutya, njl.), Iithoyi kunye nemidlalo, iimoto Iimveliso ezahlukeneyo zorhwebo, iinxalenye zezinye iimveliso ezininzi, njl.
I-extrusion yokubumba: ekwabizwa ngokuba yi-extrusion molding, ilungele ukubumba kwe-thermoplastics, kodwa ikwalungele ukubumba ezinye zeeplastikhi zokuqinisa kunye nokuqinisa okungcono. Inkqubo yokubumba kukusebenzisa isikrufu esijikelezayo ukukhupha izinto ezishushu kunye nobushushu ezinyibilikisiweyo ezivela ekufeni kunye nemilo efunekayo yecandelo elinqamlezileyo, emva koko iyilwe sisixhobo sokulinganisa, emva koko sagqitha kupholile ukwenza kube nzima kwaye kuqinise ukuba yimilo yecandelo elinqamlezileyo. imveliso.
1. Ixabiso eliphantsi lezixhobo;
2, ukusebenza kulula, inkqubo ilula ukuyilawula, kwaye kulula ukugqibezela imveliso ezenzekelayo;
3. Ukusebenza kwemveliso ephezulu; umgangatho kunye nemveliso elungileyo;
4. Emva kokutshintsha ukusweleka kwentloko yomatshini, iimveliso okanye iimveliso ezigqityiweyo ezinemilo eyahlukeneyo enamacandelo enqamlezileyo inokwenziwa.
Kwindawo ye ​​Ukucwangciswa kwemveliso, i-extrusion molding inokusetyenziswa okunamandla. Iimveliso ezandisiweyo zibandakanya imibhobho, iifilimu, iintonga, i-monofilaments, amabhanti athe tyaba, iminatha, izikhongozeli ezingenanto, iifestile, izakhelo zeminyango, iipleyiti, i-cable cladding, i-monofilaments kunye nezinye izinto ezigqityiweyo.
Blow yokubumba: izinto ezinyibilikisiweyo ze-thermoplastic ezikhutshiweyo kwi-extruder zixinaniswe kwisibumbeko, emva koko umoya uphephezelwa kwimathiriyeli. Izinto ezinyibilikisiweyo ziyanda phantsi kwefuthe loxinzelelo lomoya kwaye zibambelela eludongeni lwembumbulu. Ukupholisa kunye nokuqina kube yindlela yemilo oyifunayo. Ukubetha ukubethwa kwahlulwe ngokweendidi ezimbini: ukubethwa kwefilimu kunye nokuvuthelwa kumngxunya:
Film ukuvuthela yinkqubo extruding yeplastikhi etyhidiweyo ibe zezindlu ityhubhu obhityileyo ukusuka umsantsa setyhula ukufa extruder, nokuvuthela umoya zixinaniswe kungena kwisisu engaphakathi ityhubhu obhityileyo ukusuka embindini umngxuma die ukuba zifake ityhubhu obhityileyo ububanzi. Ifilimu enkulu ye-tubular (eyaziwa ngokuba yi-bubble tube) isongwe emva kokupholisa.
Ulenze igalelo yokubumba:
Ulenze igalelo yokubumba yindlela yokubumba yesibini esebenzisa uxinzelelo igesi ukuba afuthise parison irabha-ezifana ivaliwe kwisisu sokubumbela kwimveliso ezibuhlazarha. Yindlela yokuvelisa iimveliso zeplastiki ezingenanto. Ngokweendlela ezahlukeneyo zokuvelisa iitrosi, ukubumbela kumngxunya wokubumba kubandakanya i-extrusion yokubumba, inaliti yokubumba, kunye nokolula ukubumba.
(1) extrusion ukubetha ukubetha ukunyuka kwamaxabiso.
(2) Inaliti igalelo yokubumba: Iparison esetyenzisiweyo yenziwa ngenaliti yokubumba. Iparison ishiye ekubunjweni okungumbindi wokubumba. Emva kokuvala isikhunta ngesikhunta sokubetha, umoya oxinekileyo uziswa ukusuka kumbumba osisiseko wokufaka iparison, ukupholisa, kunye nokudiliza imveliso ukufumana imveliso.
(3) Yolula ukubumba ukubetha: Beka iparison efudunyezwe ubushushu obolulekayo kwisikhunta sokubetha, wolule ixesha elide ngentonga yolule, kwaye wolule kwaye uyicofe umoya oxineneyo kwicala elinqamlezileyo ukufumana indlela yeMveliso.
Imveliso inobunzima obufanayo bodonga, ubunzima obuphantsi, ukuqhubekeka emva kokulungiswa, kunye neekona ezincinci zenkunkuma; ilungele ukuveliswa kweemveliso ezinkulu ezichanekileyo ezinkulu.
Film igalelo yokubumba ubukhulu becala esetyenziselwa ukuvelisa ngumngundo zeplastiki obhityileyo; umngxuma wokuvumbela usetyenziselwa ikakhulu ukuvelisa iimveliso zeplastiki ezingenanto (iibhotile, imiphanda yokupakisha, iitoti zokutshiza, iitanki zepetroli, iitoti, iithoyi, njl.). Ukuya
Inqaku liphinde laveliswa kwiLailiqi Plastic Industry. I-URL yeli nqaku: http://www.lailiqi.net/chuisuzixun/548.html